Sakaza yensimbi emoyeni ukukhululwa umphini - China Tianjin Tanggu TWT Valve
yensimbi Sakaza emoyeni ukukhululwa valve
Inqubo qeda abushelelezi, kungavimbela okuvela ingcindezi nokushintshashintsha noma ezinye izenzakalo elimazayo. Air kungenziwa akhishwe iphayiphi lapho amanzi ligcwele amanzi, futhi kungenziwa bashiye noma ingcindezi negative iphayiphi, ezifana namanzi ikholomu izimo ngokwahlukana uzobe ngokuzenzakalelayo livuliwe, ku iphayiphi ukuqeda ukucindezela ezimbi. High speed qeda gas ukugeleza, ngisho okusezingeni eliphezulu Ukuhamba ngejubane exutshwe namanzi inkungu ngeke kukwenze echwebeni qeda ukuba ...
Inqubo qeda abushelelezi, kungavimbela okuvela ingcindezi nokushintshashintsha noma ezinye izenzakalo elimazayo.
Air kungenziwa akhishwe iphayiphi lapho amanzi ligcwele amanzi, futhi kungenziwa bashiye noma ingcindezi negative iphayiphi, ezifana namanzi ikholomu izimo ngokwahlukana uzobe ngokuzenzakalelayo livuliwe, ku iphayiphi ukuqeda ukucindezela ezimbi.
High speed qeda gas ukugeleza, ngisho okusezingeni eliphezulu Ukuhamba ngejubane exutshwe namanzi inkungu ngeke kukwenze echwebeni qeda sivalwe kusengaphambili. I ukuzwakalisa ivaliwe kuphela ngemva emoyeni kukhishelwa ngokuphelele.
Nganoma yisiphi isikhathi, inqobo nje ingcindezi ohlelweni lingaphansi kunalokhu umfutho womoya, ezifana okuvela kuyo amanzi ikholomu ngokwahlukana mkhuba, valve emoyeni ngeke ngokushesha ukuvula uhlelo emoyeni, ukuvimbela ukuvela ingcindezi emibi ohlelweni. Ngesikhathi esifanayo, uhlelo bethulula isikhathi ngendlela esifike ngesikhathi Ingasheshisa izinga bethulula.
Ukusebenzisa lokushisa: -20 ℃ ~ 120 ℃
Kusebenza ingcindezi: PN1.0 ~ 1.6MPa
usayizi Kusebenza: DN25 ~ DN300
Connection ejwayelekile: GB · Din · ISO · BS
Previous: Air ukukhululwa valve
Okulandelayo: Double orifce emoyeni ukukhululwa valve
ashintshekayo Air Control Valve
isiguquli samandla omoya Safety Valve
Air Khipha Valve
okuzenzakalelayo Air Khipha Valve
okuzenzakalelayo Air Valve
okuzenzakalelayo Air Vent Valve
Beer Industrial Air Khipha Valve
Sakaza Iron Air Khipha Valve
Competitive Cast Iron Air Khipha Valve
Dn50- Dn300 Air Khipha Valve
kabili Orifce Air Khipha Valve
Good Quality Air Khipha Valve
pint obujwayelekile Air Khipha Valve
Nokucindezela Khipha Valve
Quick Khipha Valve
Khipha Solenoid Valve
Sigle Orifce Air Khipha Valve
Umshini Air Khipha Valve
Amanzi Air Khipha Valve
Double orifce emoyeni ukukhululwa valve
Sigle orifce emoyeni ukukhululwa valve